Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l0512 lat
Andevo nomena fahafahana
Alatsinainy 29 Okt.
Raha takatsika tsara àry fa ny fanavotana dia fahafahana avy tamina endrika fanandevozana izay tsy maintsy nilàna fanampiana “avy any ivelany”, dia azontsika heverina fa hery na fahefana mahery vaika kokoa noho izy no namatotra ny taranak’olombelona mpanota. Ny fanontaniana ilàna valiny, dia ny hoe: inona io hery na fahefana mamatotra ny taranak’olombelona mpanota io?
Diniho ny Rôm. 6:12-23. Mariho fa miresaka ny amin’ny fahafahana i Paoly ao amin’ny and. 18,20,22. Eo amin’ny tontolon-kevitra inona no iresahany an’io fahafahana io? Inona no resahin’i Paoly eto?
Saintsaino izay voalazan’i Paoly ao amin’ireo andininy ambony eo ireo miaraka amin’izay ambarany ao amin’ny Rôm. 6:1-11. Miresaka ny amin’ny zava-mitranga amin’ny batisa kristianina i Paoly. Eto izy dia maneho ireo zavatra sasany tokony ho faty miaraka amin’i Kristy amin’ny batisa. Rehefa avy nanazava tsara ny momba ireo i Paoly, dia mampirisika ny Kristianina izay efa tafaray amin’i Kristy mba haneho Azy ho Tompo sy mpanafaka azy ireo tamin’ny herin’ny ota.
Ny fahamarinana tiana hasongadina eto araka ny voalazan’i Paoly, dia ny hoe: na ahoana na ahoana fahasimban’ny toetrantsika vokatry ny ota, dia manafaka antsika amin’ny herin’ny ota manandevo i Kristy. Iza no tsy efa nahita fa mpamotika mahatsiravina tokoa io karazana fanandevozana io? Iza no tsy efa nitolona tamin’ny herin’ny ota teo amin’ny fiainany? Tsy misy isalasalana fa io no fahavalo lehibe indrindra atrehin’ny olombelona.
Ny tena maha-zava-doza azy, dia tsy vitan’ny hoe fanandevozan’ny hery avy etỳ ivelany fotsiny izany fa mainka aza miainga avy ao anatintsika ao mihitsy. Fomba ahoana no hahafaka antsika amin’ny fanandevozana na fangejana izay avy ao anatintsika ao ihany, eny, ao anatin’ny rantsika mihitsy aza?
Ny valiny, araka ny efa hitantsika ao amin’ireo andininy eo ambony ireo, dia amin’ny alalan’ny herin’i Jesôsy irery ihany. Efa azony ho antsika mantsy ny fandresena ka atolony antsika ny hery hoenti-mandresy. Amin’ny alalan’i Kristy, dia tsy vitan’ny hoe voavela ihany ny otantsika fa tokony ho faty ny aminy koa isika, ary afaka aminy. Tsy tokony hifehy antsika intsony izany. Teny fikasana mahatalanjona tokoa izany, teny fikasana manan-kery, teny fikasana tokony hotakin’ireo milaza azy ho mpanara-dia an’i Kristy rehetra ho an’ny tenany.
Inona no fanandramanao manokana mikasika ny herin’ny ota manandevo sy feno haratsiana? Ahoana no hianaranao mifikitra bebe kokoa amin’ireo teny fikasana mahafinaritra momba ny fahafahana izay efa natolotra antsika tao amin’i Jesôsy?